ပျင်းဖို့တောင်ပျင်းနေပြီလား – Live the Dream
အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတော့ အရမ်းပျင်းလာတယ်၊ ဖုန်းကြည့်ရတာလည်း စိတ်ညစ်လာပြီ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာလည်း ပျင်းလာပြီ၊ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ချင်တော့ဘူး… ပျင်းရမှာတောင် ပျင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေ ရောက်နေ ပြီလား။ ဒီလိုဆိုရင် မင်မင့်မှာ အချက်တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ အသုံးဝင်မလားတော့ မပြောတတ်ပေမယ့် စမ်းကြည့်တာလည်း မမှားလောက်ဘူး ထင်တာပဲနော်။ ကဲ ပျင်းရိခြင်းကို ဖြေရှင်းကြည့်ကြတာပေါ့။
သူငယ်ချင်းတွေကို ငါပျင်းနေတယ်လို့ သွားပြောလိုက်ရင် ဟိုဟာလုပ်ကြည့်ပါလား၊ ဒီဟာလုပ်ကြည့်ပါလားနဲ့ ပျင်းနေပါတယ်ဆိုမှ ဘယ်လုပ်ချင်မလဲ… ပျင်းတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ဝါသနာပါတာလေး လုပ်ခိုင်းလိုက်၊ စာဖတ်ခိုင်းလိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခိုင်းလိုက်နဲ့ ကြားရတာပေါင်းလည်း များနေပြီ၊ ကြာလေ ပိုပျင်းလာတာပဲရှိတယ် ဘာမှထူးခြားမလာဘူး။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ကဲ့… ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ ပျင်းနေတာကို ဖြောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ ဘာမှလည်းစိတ်မပါ ပိုပိုပျင်းလာလေ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလာလေပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပျင်းဖို့တောင် ပျင်းပါတယ်ဆိုနေ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆို ဝေးရောပေါ့။ အဲတော့ ဒီတိုင်းပဲနေပါ၊ အိပ်ချင်ရင်အိပ်၊ ထိုင်ချင်လည်းထိုင်၊ အတွေးကမ္ဘာထဲ နစ်မြောချင်လည်းသဘော… ကြိုက်သလိုနေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပျင်းတော့ ပျင်းနေပေမယ့် အခုလိုဘာမှမလုပ်ဘဲလည်း မနေချင်ဘူး… တစ်ခုခုစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နည်းတစ်ချို့ ရှိပါသေးတယ်နော်။
စကားပြောတာက ပျင်းရိမှုကို လျှော့ချဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ အိမ်မှာ အမေ၊ အဖေ၊ အဖိုး၊ အဖွား တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားတွေပြောကြည့်လို့ရတယ်… သူတို့ငယ်ဘဝက အကြောင်းတွေများ မေးကြည့်လိုက်ရင် အားရပါးရကို ပြန်ပြောပြတာ၊ စွန့်စားခန်းတစ်ခုကို နားထောင်နေရသလိုပဲ၊ လုံးဝကို မပျင်းရဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမပြောချင်ဘူးလား… ရတယ်။ လိုင်းပေါ်ကနေ ပြောလို့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြောရတာငြီးငွေ့နေရင် လိုင်းပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းအသစ်ဖွဲ့ကြည့်၊ လူသစ်နဲ့ စကားပြောတယ်ဆိုတာ မတူတော့ ဘူးလေ။ ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှာတွေ့နိုင်တယ်၊ ကိုယ်နဲ့ စကားလမ်းကြောင်း တည့်တာလည်း ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့် Crush ကိုစကားပြောဖို့ ကြိုးစားကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးဗန်း ဖြစ်ဖြစ် ခင်းကြည့်လို့ရတယ်လေ။ ဒါတွေက မတူညီတဲ့ အခြေအနေဆိုတော့ တကယ့်ကို သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားတစ်ခုလို ခံစားရမှာမို့ ပျင်းဖို့အချိန်တောင် ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးရင် စကားပြောဖို့ နည်းလမ်းဗျူဟာတွေလည်း ထုတ်ရသေးတော့ ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးပြီးသား ဖြစ်သွားတာပေါ့။
၃. Challenge လုပ်ကြည့်မယ်
ခုတလော လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ Challenge accepted ဆိုတာလေးတွေ အတွေ့များလာရပါတယ်။ ဒါလည်းတစ်မျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပါပဲ… ပျင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါတွေထက် ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းတဲ့ Challenge တွေလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော…။ တကယ့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ လိုချင်ရင်တော့ အရင်ကမလုပ်ရဲခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေကို Challenge ခေါ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ သရဲကြောက်လို့ သရဲနဲ့ ပက်သက်သမျှ ရှောင်နေခဲ့ရင် သရဲကားကြည့်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်… သရဲဝတ္ထုဖတ်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် သရုပ်ဆောင်တာ ဝါသနာပါပေမယ့် ကြောက်လို့မလုပ်ရဲခဲ့ရင် သရုပ်ဆောင်ကျင့်ရင်း အိမ်ကလူတွေရှေ့ ပြကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ကြောက်တဲ့အရာတစ်ခုခုကို စိန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင် စိတ်လည်း လှုပ်ရှားရတယ်၊ လုပ်ရဲတာနဲ့ မလုပ်ရဲတာအကြား လွန်ဆွဲနေတာနဲ့တင် ပျင်းဖို့ဆိုတာ သတိရမိမှာတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောလို့မရဘူးလေ ပြီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ်ဟာအကြောက်တရားတစ်ခုကို အောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့။
၄. Online ကိုလေ့လာပါ
Online ကိုသင်ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီဟု ထင်နေပါသလား။ တစ်နေ့တစ်နေ့ လိုင်းလေးဖွင့်လိုက်၊ NF လေးပွတ်လိုက်၊ ရုပ်ရှင်လေးကြည့်လိုက် လုပ်နေရုံနဲ့တော့ Online ဆိုတာကြီးက နားလည်ရခက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်များ Online နဲ့ ၂၁ ရာစုခေတ်မှာ ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ ကြွေးကြော်နေကြတာလဲ။ Online ကနေ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေ ရနိုင်တာလဲ။ Online ကဘယ်လောက်ထိ အကျိုးပြုနိုင်လို့လဲ။ သူများတွေ Online ကနေ ပိုက်ဆံရှာကြတာ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြတာလဲ၊ Online နဲ့ပက်သက်ပြီး ကိုယ့်အသိအမြင် ဗဟုသုတကရော ဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်သလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးကြည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်နဲ့အရင်းနှီးဆုံး Facebook, YouTube ဆိုတာတွေကို လေ့လာကြည့်ပေါ့။ သေချာလေ့လာလေလေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိလေလေပါပဲ။ Online ဆိုတာကိုသာ သေချာနားလည်ပြီး အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင် ပျင်းတယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိဘူးတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်။